Omume kachasị mma iji rụọ ọrụ glutes n'ụlọ | Bezzia
Omume kachasị mma iji rụọ ọrụ glute gị n'ụlọ
Nke Torres | | Mmega ahụ
Mgbe ịchọrọ ịmalite ịtụgharị ahụ gị, ụkwụ na buttocks bụ mpaghara kachasị mkpa n'ozuzu ya. Karịsịa ugbu a telivishọn na ihe isi ike ịpụ apụ emeela ka anyị nwee nkụda mmụọ n'ụzọ anyị si emega ahụ. Mana ọ bụ oge imepụta ahụ na ekele maka ọnọdụ anyị nwetara, anyị amụtala ime ya n'ụlọ n'ụzọ ka mma.
Nsogbu bụ na ịnọgidesi ike adịghị mfe, ọbụlagodi mgbe enweghị ọnọdụ mpụga dịka ịkwụ ụgwọ mgbatị ahụ. Yabụ, ị ga -echerịrị nke ọma ihe ebumnuche gị bụ ma setịpụ onwe gị ihe ịma aka dị ọnụ iji nwee ike ịhụ nsonaazụ ya. Chọta mmega ahụ kacha dabara adaba maka gị, mụta ịrụ ha nke ọma ma webata ha n'ime usoro gị ọzụzụ iji gosi okwe nwere ụda dị mma na nke akọwapụtara nke ọma.
1 Ihe omumu iji rụọ ọrụ glute n'ụlọ
1.1 Buttock na -agbagharị
1.2 Wuo squat
1.3 Ịnyịnya ibu na -agba ụkwụ
1.4 Zere ibi ndụ nke ịnọ otu ebe
Ihe omumu iji rụọ ọrụ glute n'ụlọ
Ụzọ ndụ ịnọkarị otu ebe na -emetụta ahụ ya n'ozuzu ya yana ọmarịcha ihe. Mgbe ịnọ ọdụ ogologo oge, abụba na -agbakọta na isi. Na, ọ bụrụ na ị nweghịkwa ezigbo nri, A na -emepụta capsules abụba nke na -atụgharị n'ime cellulite. Ya mere, ọ dị ezigbo mkpa ịlụso oge ọrụ ọgụ omume iji wusie ike, ụda ma kọwaa isi, dị ka ndị a ka anyị ga -ahapụrụ gị ọzọ.
Buttock na -agbagharị
A na -ahụ mgbatị ahụ a ka ọ kacha mma maka ịkwanye ụkwụ na azụ. Agbanyeghị na ọ dị ka ọ dị nfe, ka a na -eme mmegharị ahụ, ọ ga -esi ike ịga n'ihu. Chee echiche banyere ebumnuche gị mgbe ị na -eme mmega ahụ ị ga -achọpụta nsonaazụ ya n'oge na -adịghị anya.
Iji mee squats buttock ị ga -etinyerịrị onwe gị n'ọnọdụ squat, ya bụ, ka ụkwụ gị yie ma kwụ ọtọ. Mgbe ị na -agbada ime squat ị ga -eweghachite azụ gị, mgbe ị na -ehulata ikpere gị ruo mgbe apata ụkwụ gị yiri ala. Malite na 12 reps maka ụbọchị ole na ole mbụ wee rụọ ọrụ gị ruo 15 mgbe ị mụtara mmega ahụ.
Ụdị squat ọzọ zuru oke iji rụọ ọrụ glute, yana ụkwụ yana n'ozuzu ahụ niile. Iji mee mmega ahụ, ị ​​ga -abanyerịrị n'ọnọdụ squat mbụ. Mgbe ị gụchara ukwu na ikpere gị, wụlikwa elu ka ịlaghachi n'ọnọdụ mbụ gị. Gbuo ikpere gị ala ma megharịa, malite na 7 reps maka otu ọ bụla ma na -abawanye ka ị na -enwe ọdịdị.
Ịnyịnya ibu na -agba ụkwụ
Aha mmega ahụ na -akọwa nke ọma, ebe ọ bụ maka ịgha azụ azụ ka ịnyịnya ibu ga -eme ịgba. Ọ bụ ezie na ọ dị ka ihe na -atọ ọchị, ọ bụ mmega ahụ dị oke arụ ọrụ ị na -arụ ọrụ okpu isi n'ụlọ, na -enweghị ihe ọ bụla na ike siri ike. Bilie na ute n'ala, dabere n'ikpere na n'ọbụ aka.
Tụgharịa ụkwụ gị azụ wee jide ya n'ọkwa 90, welite nke ọma ruo mgbe ọ gafere n'úkwù, na -ahụ ka gluteus si amalite ịrụ ọrụ. Tinyegharịa mmegharị ahụ n'ekweghị ka ikpere gị metụ ala mgbe ị ruru ọnọdụ izu ike. Mee mmegharị ugboro 10 n'ụkwụ ọ bụla, na -abawanye ka ị na -enwe ọdịdị ma mara mmega ahụ.
Zere ibi ndụ nke ịnọ otu ebe
Omume ndị a iji rụọ ọrụ glute gị n'ụlọ dị ọnụ ala ma dịkwa mfe ịme ma ọ bụrụ na ị na -eme ya oge niile. Mana n'okporo ụzọ ị nwekwara ike megharịa akụkụ ahụ a n'ụzọ dị mfe, jee ije ka ike kwere gị mgbe ọ bụla ị nwere ohere, rịgoo n'elu steepụ abụọ abụọ, ebe ọ bụ mmega ahụ zuru oke ịkpụzi isi.
Ọ bụrụ na ị ga -anọ ọtụtụ awa ịnọdụ ala maka ọrụ, ọmụmụ ihe ma ọ bụ maka ihe ọ bụla kpatara ya, ị kwesịrị ịmara na isi gị ga -emetụta akụkụ ahụ gị niile. Yabụ na ị ga -eji akọ na uche na -arụ ọrụ iji zere nsonaazụ nke mkpa ndị ahụ. Na mgbakwunye na mmega ahụ iji rụọ ọrụ glute gị, jide n'aka na ị were opekata mpe lita mmiri abụọ n'ụbọchị, rie nri nwere eriri, zerekwa nri ndị a na-ahazi nke ọma ebe ọ bụ na ha ga -anọrịrị n'akụkụ ahụ mara mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ahụike » Mmega ahụ » Omume kachasị mma iji rụọ ọrụ glute gị n'ụlọ
Mmehie 4 na -eme ka ị nweta ibu n'amaghị ama
3 echiche maka imepụta etiti mgbụsị akwụkwọ